Box.Com na-eme ka Filekesa faili dị mfe
Ọ dịtụla mgbe enwere nsogbu mgbe ị na-eziga faịlụ buru ibu nke ozi gafee atụmanya, ndị ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ azụmahịa? FTP emetụtaghị dị ka nhọrọ a ma ọ bụ nke enyi na enyi, yana mgbakwunye email nwere oke nke ha na nsogbu ha. Inwe ihe ndekọ aha na sava faịlụ dị na ya nwere ohere ịnweta ma mekwuo ọrụ maka ndị otu IT.
Uzo nke ígwé ojii Mgbakọ ugbu a na-enye azịza dị mma, yana n'etiti igwe ojii dị iche iche na-enye onyinye na-enye ohere ịchekwa, ijikwa na ịkekọrịta ọdịnaya n'ịntanetị, dị mfe dị ka izipu ozi email, bụ Box. Ihe na-eme ka Igbe dị iche na nke ndị ọzọ bụ ikike ya iji bulie ụkpụrụ abụọ dị mkpa, mana a nwalere oge dị ka echiche ọrịre pụrụ iche - mfe na ọsọ.
Igbe na-enye ihe niile dị mkpa iji chekwaa na imekọrịta ọdịnaya n'ịntanetị. Ihe niile ọ na - ewe bụ ịpịnye nkọwa ole na ole iji mepee akaụntụ wee dọrọ folda, ọbụlagodi faịlụ mgbasa ozi, na ebe ọrụ ịntanetị na-ekerịta. Naanị izipu njikọ nke ọnọdụ nchekwa ahụ site na email ma ọ bụ ozi ozugbo, site na Igbe ma ọ bụ onye ahịa email gị, na-enye ndị ọzọ ohere ịlele, dezie, ma ọ bụ bulite faịlụ, itinye aka na mkparịta ụka na ọdịnaya ahụ, na ndị ọzọ.
Igbe na-eme ka usoro di elu ma dị mgbagwoju anya dị mfe. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - eme ka nsụgharị na - achịkwa enweghị ntụpọ site na iji otu njikọ njikọ ahụ ọbụlagodi mgbe ebugoro nsụgharị ndị ọhụrụ. Onye nwe akaụntụ ahụ na-enweta nkọwa zuru ezu, nri oge na-arụ ọrụ nke ihe ndị mere na ọdịnaya. Nhọrọ ikike siri ike na ikike ịkọ akuko na-enye njikwa zuru oke na ọdịnaya, yana izo ya ezo yana ihe nchebe ndị ọzọ na-eme ka nchebe nzuzu pụta. Igbe na-ejikọta na Google Apps na Salesforce, ma enwere ike weghachite site na ngwaọrụ mkpanaka.
Igbe dị na nsụgharị atọ: Igbe maka Onwe ya na nchekwa 5 GB n'efu, Igbe maka Azụmaahịa, na Igbe maka Enterprise na $ 15 / onye ọrụ / ọnwa maka ihe nchekwa 2 GB kwa.
Igbe kpọrọ ọrụ ya dị ka Mmekọrịta Dị Mfe Dị Mfe. Echere m na nke a bụ obere bit nke a gbatia dị ka ahụ n'ezie mmekota ike na-a bit amachi; Agbanyeghị, ọ bụ usoro ike ịkekọrịta faịlụ nke siri ike nke obere ụlọ ọrụ nwere ike ịmalite ma tolite n'ụzọ niile site na iji ya. Ndị otu azụmaahịa nwere ike ịhụ ngwa ọrụ bara ezigbo uru iji hazie ma kesaa ihe akaebe, ọdịnaya, na akwụkwọ ndị ọzọ metụtara ụlọ ọrụ.
Tags: mmekotaịkekọrịta faịlụmmekorita n'ịntanetịnnyekọrịta faịlụ na ntanetịusoro faịlụ ntanetịotu mmekota
Jun 5, 2012 na 11:07 AM
Adịwo m onye ọrụ Box ruo oge ụfọdụ. Ọ bụ ezie na enweghị ụfọdụ atụmatụ nke ọrụ asọmpi dịka Dropbox (onye ọrụ mmekọrịta tebụl a pụrụ ịdabere na ya maka otu), achọtala m ịdị mfe karịa imeju ihe ọ na-enweghị.
Otu ihe di egwu bu ikike itinye ebe nchekwa mgbe ichoro ndi ozo. Maka onye ọrụ ọ bụla akwadoro nke debanyere aha, ị ga-enweta 5 gigs nke nchekwa ọzọ. M ruo 50 gigs (!) N'oge a, yabụ etinye m ego na igbe.